Iindaba -Shijiazhuang Sunline yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ukuthengisa Co., Ltd.
Inkampani yethu yiShijiazhuang Sunline Import & Export Trading Co, Ltd. Sinobume obunobume bejografi, ineminyaka eli-13 yembali, ukusukela ekusekweni ukuza kuthi ga ngoku ngokuthe ngcembe siphucula intsimi nganye, ukusuka kwimveliso enye yangaphandle, ukuya kwiindidi zemveliso yanamhlanje kugqityiwe , kwaye itekhnoloji yemveliso kunye namava aya esiba sisityebi ngakumbi.Singabonelela abathengi ngeenkonzo ezifanelekileyo ngakumbi kunye nezigcweleyo.Isikali senkampani yethu sikwasoloko sikulwandiso, siyathemba ukuba simanyene ukwakha inqanaba eliphezulu.
Inkampani ineminyaka eli-12 yamava kwimveliso yengubo, iqela leengcali elinokuthenjwa unyaka nonyaka, ukukhula ngokukhawuleza kwamandla emveliso unyaka nonyaka.
Iibhibhi zabantwana, Iidyasi zabantwana, ii-skisuits zabantwana, ibhegi yokulala yabantwana, I-rain cape net net, Guqula ibhatyi enephedi, ibhatyi yesuti yokuhamba.
Inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo yokuqinisekisa ukuba iimpahla zethu ziya kufana neesampulu oziqinisekisileyo. Abasebenzi abanamava, abanamava kulawulo lomgangatho, ukusuka kwimveliso ukuya kuthumelo, ulawulo olungqongqo.
Iindlela zokuhamba kunye nentlawulo zikwahlukeneyo.
Sineenqanawa, umoya, umhlaba, ukuvakalisa kunye nezinye iindlela ezine zothutho, ukuze iimpahla zikwazi ukufikelela kuwe ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Iindlela zokuhlawula sineendlela ezahlukeneyo zokuhlawula onokuzikhetha, ezinje ngokudluliselwa kwenkampani, ukuhanjiswa kwangasese, iNtshona Union, ileta yekhredithi, i-inshurensi yetyala, ileta yesiqinisekiso, njl.
5. Malunga nomzi-mveliso
Sineziko lethu lokulungisa, elibekwe kude nenkampani iLuancheng. Xa ukhetha iimveliso zethu, awuzukuba naxhala malunga nexabiso kunye nomgangatho, kuba sinefektri yethu, enezibonelelo kwixabiso kunye nomgangatho.
Malunga namalungu enkampani
Inkampani inabantu abangama-50 kwiSebe laseShijiazhuang, elahlulwe laba lisebe lezamashishini, igumbi lesampulu, isebe le-QC, isebe elinika ingxelo kunye nesebe lolawulo. Sebe ngalinye linecandelo elicacileyo labasebenzi. Xa ufaka iodolo, isebe ngalinye liqala ukusebenza kunye ukwenza iodolo yakho ihanjiswe ngexesha.
Xa ufuna iimveliso zempahla yabantwana, inkampani yethu yeyona ikhethekileyo. Nceda uthembe inkampani yethu kwaye ujonge phambili kwimibuzo yakho.
Ixesha lokuposa: Mar-09-2021